The Gwenzi makumi matatu paylines slots, Luchadora ari dzinofambiswa ne Thunderkick Software. ichi cheap car insurance bhonasi mutambo rakafuridzirwa nokuda zvikuru kunakidza Mexican mutsimba nechipiriso mitoro varaidzo kuti vatambi.
Pamusoro Developer pamusoro Luchadora
ichi cheap car insurance bhonasi mutambo kunokudziridzwa nevaduku asi zvinovimbisa kambani inonzi Thunderkick vari pamwe chete NYX. The paIndaneti mitambo yakataurwa ichi kambani kupa madingindira siyana pamwe rokusika Gameplay.
ichi cheap car insurance bhonasi mutambo ndiyo Gwenzi mashanu mina slots izvo zvinoreva kuti pane zviratidzo mana nechimwe vanodzungunyika. The paylines makumi matatu Luchadora vari wakaiswa. Game yakaitika mutsimba mhete pamwe makona ayo mana anozivikanwa uye vazhinji mutsimba mapepa vari ukatakata nezvazvo. The anozivikanwa makona achava basa guru iri bhonasi zvinhu. The cheap car insurance bhonasi mutambo anogona kuridzwa kubva risingamboshandisi bheji ane 10p uye kukwira kusvikira kunonyanyisa bheji ye £ 100 paminiti kuruka pamusoro siyana enderana namano. Four Masked mutsimba El Toro, Rayo, ari Nyoka, uye El Pantera, uyewo feisty uye Eerie Campeon, vari mukuru ukoshi mifananidzo iri Gwenzi. The low-ukoshi zviratidzo vanomirirwa vamwe chepakutanga Mexican miriwo akafanana pepper uye chilli namavara siyana. ichi cheap car insurance bhonasi mutambo chinewo maviri bhonasi zviratidzo. Vari anofananidzirwa Lucha Smackdown uye Luca bhonasi chiratidzo.
Zvakasiyana-siyana slots uyu:
Ring makona- Panguva dzose mutambo kana wrestler ikaonekwa chero waivapo pakona ipapo zvose zvimwe dzakafanana zviratidzo pamusoro Gwenzi kuchachinja kuva remake. Izvi anokupai mikana nani rokuumba yepamusoro kuhwina mubatanidzwa. Remake ichatsiva zvose zvinokosha zviratidzo.
Lucha Smackdown- In dzose mutambo, ichi kuvake nyika chete vanodzungunyika 5 uye mibayiro iwe 7, 11, kana 15 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso uyewo mubayiro penyu kusvikira 15x multiplier.
Lucha Free Muruoko rwake anobata chirukiso- Nyaya iyi ndiye anosarudza achiwana matatu kana kupfuura Lucha bhonasi kuvake. You vanogamuchira 7, 11, uye 15 vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso nokuti kumhara 3, 4, kana 5 bhonasi zviratidzo. The mhete pamakona vari kushingaira panguva iyi dzinoti. Chero wrestler kumhara pamusoro peumwe wavo vacharamba mhuka kwenguva ya yacho inoti. Varwi All zvina kuchinja kupinda remake zvinoita kunobatsira kuvake La Luchadora kutora nzvimbo zvose Misterioso Campeon mifananidzo.
luchadora chinhu naka slots kuti kwete chete anotarisa zvinoshamisa uye inopa netsapo zvinovaraidza asi rinewo vashoma kwazvo mubayiro bhonasi zvinhu.